Part 1 : Wang
Eliphepha lisinika i-formal syntax framework yelwimi zabantu. Lizokucacisaii-abstract syntax kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo. I-linguistics licala lezifundo apho kuzanywa ukwazi ukuba iilwimi zabantu zisebenza njani. Iilwimi ziintetho kunye n...
Review : The Other Crucifix
Le ncwadi ndiyithenge e-Blank Books.Andinamali kwezintsuku, indoda ngoku ikhangela indawo eneencwadiezinexabiso elifikelelakayo. Into embi yinto yokuba amaxabiso walavekileangaphaya kokuqonda. Ndiye ndafumana incwadi ethi Indaba My Childrenby Vusa...
Namhlanje sizakuhlalutya le ndaba ye-grammar engine. Ingaba kuthen ibalulekile?Sibuyela kwiphepha lika-Dale kunye no-Reiter, sikhangela ingcaciso. Ababhalibathi abantu abaninzi bayijonga njengento eyinguqulelo ye-parsing le ndabaye-linguistic real...
Part 2 : Twala
Namhlanje sizokuqhubekeka nomsebenzi kamam’ uTwala. Zizakuqala ngokujonga ii-criteria zokwazi ukubaisibizo sihlala kweliphi ihlelo. Asizokuthetha kakhulu kodwa ngalonto. Namhlanje sizokuqwalasela izimaphambili kunye nezivumelanisi. Imifanekiso uza...
Part 1 : Twala
Umsebenzi kamama u-Edith Twala uphica-phica amahlelo ezibizo kwisiZulu. Ndicingaukuba ifani le ibizwa ngokungathi ino-H (Thwala). Isizathu salento kukuzama ukwehlula amahlelo. Ulwazi oluxelwa apha yingqokelela yezinto ekusele zisaziwa. I-chapte...